दमरोगले निम्ताउन सक्छ डिप्रेसन - डा. रवि महत
दम भन्नले के बुझिन्छ?
दम रोग भन्नाले श्वास-प्रश्वासमा आउने कठीनाई हो। वातावरणीय प्रदुषण, धुवाँधुलो, चिसो तथा फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणबाट हुने विभिन्न एलर्जीका कारण जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई दम हुन सक्दछ ।
यदि कसैलाई एलर्जी छ र त्यो लामो समयसम्म रहृयो भने मानिसलाई दम हुने गर्दछ ।
सामान्यतयाः वायु प्रदुषण तथा एलर्जीका कारण हुने दम उपचारबाट निको पार्न सकिन्छ । तर खोकी लाग्दालाग्दै पनि त्यसको उपचारै नगरी, स्वाँ-स्वाँ हुने, छाती कराउने अवस्थाको सिर्जना भएमा क्रोनिक दम हुने गर्दछ ।
बच्चाहरुमा भाइरल संक्रमणका कारण ब्रोनकाइटिस भएमा पनि दम जस्तै लक्षण हुने गर्दछन् ।
दम रोग दुई प्रकारको हुने गर्दछ
यो दम भर्खरको मानिसहरुलाई लाग्ने गर्दछ।
लाग्ने कारण- एलर्जी, वायु प्रदूषण
यो दम प्राये ४० कटेको मानिसहरुलाई लाग्ने गर्दछ।
लाग्नुको कारण - धुम्रपान, वायु प्रदूषण
धुलो धुवाँले गर्दा दमको बिरामीहरु कत्तिको बढ्नु भएको छ?
-धुलोधुवाँमा लामो समय बस्दा दमको समस्या यसै पनि हुने गर्दछ र यदी पहिला बाटै दम रोग छ भने अझै गार्हो गराउँछ। त्यसैले धुलोधुवाँ बढी हुने मौसममा अस्पतालमा दमको बिरामीको चाप पनि बढी पाईन्छ।
दम लाग्नुको थप कारणहरु
१। वंशाणुगत दम:
विशेषगरी ३०/३५ वर्ष उमेर समूहका मानिसमा प्रायः देखिने यस्ता दम वंशजका कारण हुने गर्दछ । वंशाणुगत कारणले हुने भएकाले यस्ता दम पूर्ण निको पार्न कठिन हुने गर्छ । यो रोग ढल्कदो उमेरसँगै बढेर जान्छ ।
२। मौसम परिवर्तन :
कयौं मानिसहरुमा मौसम परिवर्तनका कारण पनि दम हुने गर्दछ । यस्ता एलर्जी विशेषगरी फागुन, चैत तथा असोज, कात्तिक महिनामा अर्थात् फूल फूल्ने मौसममा बढी देखा पर्ने गर्दछ । विशेषगरी फूल फूल्ने मौसममा फूलको परागको कणका कारण मानिसलाई एलर्जी हुने गर्दछ । जसले दम बढाउँछ ।
३। पेशागत :
मिल, मैदा उद्योग, कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, बाटोघाटोमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमा पनि दमको जस्तै समस्या देखिने गर्दछ । जसलाई चिकित्सकिय भाषामा ‘पेशागत दम खोकी’ भन्ने गरिन्छ । काम गर्ने क्रममा धुलो धुँवा उड्ने र श्वास फेर्नेबेला नाक मुखबाट फोक्सोसम्म धुलो गएर दम हुन्छ ।
जीवनशैली र दमको सम्बन्ध
- यो बिशेषगरी मोटो मानिसलाई बढी लाग्ने गर्दछ।
- धेरै पातलो हुनाले पनि समस्या ल्याउनेगर्छ।
- धुम्रपान,मध्यपानले पनि यो समस्यालाई अझै बढाउँछ।
- कुपोसण भएका मानिसहरुमा पनि यसले समस्या निम्ताउने गर्छ
यो रोग महिलामा बढी देखिन्छ कि पुरुषमा?
यो रोग महिलालाई बढी लाग्छ अथवा पुरुषलाई बढी लाग्छ भन्ने हुँदैन र यो जुन पनि उमेर समुहलाई हुनसक्छ।
नेपालमा दम रोगको अवस्था?
यो रोग विश्वव्यापी समस्या हो। नेपालमा पनि यो रोगले धेरै मानिसहरुलाई सताईरहेको छ किनभने हाम्रो देशमा धुम्रपान गर्ने मानिसहरु अत्याधिक मात्रामा छन्। यस्तै गरी शहरी क्षेत्रमा वायुप्रदुशण पनि यसको मुख्य कारण हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बिशेष गरेर महिलाहरुमा जो दाउरामा खान पकाउनुहुन्छ त्यो धुवाँले पनि चुरोटले जतिकै असार गर्दछ। यसले श्वासप्र्श्वास प्रणालीलाई असर गर्दछ। ग्रामिण भेगमा दम लाग्नुको यो मुख्य कारण हो।
मानसिक स्वास्थ्य दमले कत्तिको असर गर्छ?
सास फेर्न गार्हो भएपछी मानिसलाई आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्न अफ्ठेरो हुने गर्छ। आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप गर्न नसक्दा त्यसले मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकुल असर पार्छ। बिरामीलाई अब म केही गर्न सक्दिन, धेरै बिरामी भये भन्ने सोच आउने जसको कारणले उसलाई डेप्रेसन पनि हुने गर्दछ। दम रोगको जटिलतामा डीप्रेसन पनि एक हो।
बिरामीको अवस्था र दमको प्रकार हेरेर उपचार विधी फरक हुने गर्छ। मुख्य औषधी खाने अवस्थामा ट्याबलेटहरु पाईन्छ र सबैभन्दा प्रभाबकारी तान्ने औषधी हुन्छ।
यदि कसैलाई वायु प्रदुषण, मौसमी परिवर्तन लगायतका कारणले दम भएको देखिएमा सो मौसममा नियमित औषधि सेवन तथा निरन्तरको उपचारबाट यो रोग पूर्णरुपमा निको पार्न सकिन्छ । तर यदि उक्त व्यक्तिलाई वशांणुगत कारणले दम भएको छ भने चाहिँ त्यो पूर्णरुपमा निको नहुन पनि सक्दछ ।
दमले निम्ताउने जटिलताहरु
- सिओपी डि दम लागेको मानिसलाई बढी जटिलता देखिने गर्दछ।
- हृदयघात लाग्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ
- दायाँ च्याम्बरमा बढी दबाव परेर शरीर सुन्निने,पेट फुल्लिने, रगत बाक्लो हुने समस्या आउन सक्छ
- डिप्रेसन हुनसक्ने सम्भावना
- हड्डीहरु कमजोर हुने समभावना बढी
- मुख्यकुरा धुम्रपान नगर्ने। आफुले मात्रा होईनसंगै बसेको अरुको धुवाँले पनि असर गर्छ।
- ग्रामीण भेगमा सकेसम्म सुधारिएको चुलोको प्रयोग गर्ने
- शहरी क्षेत्रमा प्रदुसणबाट बच्न सकेसम्म मास्कको प्रयोग गर्ने
- गर्भवती महिलाले धुम्रपान नगर्ने किनभने यसले पेटमा भएको बच्चालाई पनि असर गर्दछ।
( श्वास-प्रश्वास विशेषज्ञ डा. रवि महतसँगको अन्तर्वातामा आधारित )